Ampiharo Canada Visa | Canada Visa Online | Taratasy fangatahana visa ho an'ny mpizaha tany Canada
Visa Canada ho an'ny tompon'ny Karatra maitso amerikana
Canada Visa ho an'ny teratany anglisy
Visa any Kanada ho an'ny olom-pirenena espaniola
Canada Visa ho an'ny olom-pirenena frantsay
Visa any Kanada ho an'ny olom-pirenena israeliana
Canada Visa ho an'ny olom-pirenena Italiana
Visa Kanada ho an'ny olom-pirenena Koreana Tatsimo
Visa Kanada ho an'ny olom-pirenena portogey
Visa Canada ho an'ny olom-pirenena Shiliana
Kanada ETA Application Process
eTA Kanada Visa Application
Kanada Fepetra takiana
Fitakiana fidirana amin'ny Canada
Kanada eTA Karazana
Mandehana mankany Canada amin'ny karatra maintso amerikana
Visa mpizahatany any Kanada
Tsidiho ny Canada on Business
Visa miasa amin'ny fialan-tsasatra Canada
Canada Visa ho an'ny marary amin'ny fitsaboana
Dingana manaraka - Aorian'ny eTA Canada Visa
Zava-misy momba an'i Kanada
CASTLES ANY KANADA
TOERANA MITANDRINA ATO KANADA
Toerana tsara indrindra amin'ny ririnina any Canada
Toerana ambony fanaovana ski
Farihy tsy mampino any Canada
Fitsidihana ireo Tendrombohitra Rocky
Torolàlana mankany amin'ny Riandranon'i Niagara
Tranonkala lova eran-tany
Oktoberfest any Canada
Hockey Ice any Canada
Tany efitra kanadiana tsy mampino
Fitsangatsanganana maharitra Kanada
Fararano any Canada
Vatosoa miafina any Kanada
Nisokatra indray ny sisintany Kanada-Etazonia
Covid-19: Namoaka pasipaoro fanaovana vaksiny i Canada
Covid-19: Nanadio ny fameperana fitsangatsanganana i Canada
Fanitarana visa ho an'ny mpianatra iraisam-pirenena
Eligibility Canada eTA
Kanada ary fampiharana
Canada eTA (fanomezan-dàlana momba ny dia lavitra)
eTA Canada Visa (Canada Visa Online) dia fahazoan-dàlana ilaina ho an'ireo mpandeha mitsidika an'i Kanada noho ny fandraharahana, fizahan-tany na fitateram-bahoaka. Ity dingana an-tserasera ity ho an'ny Visa elektronika ho an'i Canada dia nampiharina tamin'ny taona 2015 nataon'ny Governemantan'i Kanada, miaraka amin'ny tanjona hamela ireo mpitsangatsangana mety ho avy hangataka eTA mankany Canada.
eTA Canada (Canada Visa Online) dia fahazoan-dàlana ilaina amin'ny mpandeha mitsidika an'i Kanada noho ny fandraharahana, fizahan-tany na fitateram-bahoaka. Ity dingana an-tserasera ity ho an'ny Visa elektronika ho an'i Canada dia nampiharina tamin'ny taona 2015 nataon'ny Governemantan'i Kanada.
1. Fampiharana eTA feno
2. Raiso ny eTA amin'ny alàlan'ny mailaka
3. Midira any Canada
Inona no atao hoe Canada eTA na Canada Visa Online?
Ao anatin'ny fifanarahana niarahana tamin'i Etazonia hiarovana tsara ny sisin-tanin'ny firenena roa tonta, nanomboka ny volana Aogositra 2015 dia nanomboka a Fandaharam-potoana Visa Waiver ho an'ny firenena tsy manan-kery Visa izay ny olom-pireneny dia afaka mandeha any Canada amin'ny fangatahana taratasy fahazoan-dàlana elektronika ho solon'izay, izay fantatra amin'ny anarana hoe eTA ho an'i Canada na Canada Visa Online.
Ny Canada Visa Online dia miasa toy ny antontan-taratasin'ny Visa Waiver ho an'ireo teratany vahiny avy amin'ny firenena mahafeno fepetra (Visa Exempt) izay afaka mandeha any Canada nefa tsy mila visa avy amin'ny Masoivoho Kanadiana na Consulate fa mitsidika ny firenena ao amin'ny eTA ho an'i Canada izay afaka azo ampiharina sy azo amin'ny Internet.
Ny Canada eTA dia manao asa mitovy amin'ny Canada Visa saingy mora azo kokoa izany ary haingana kokoa koa ny fizotrany. Canada eTA dia manan-kery ho an'ny asa aman-draharaha, fizahantany na fitaterana ihany.
Ny vanim-potoana maha-ara-dalàna ny eTA anao dia tsy mitovy amin'ny faharetan'ny fijanonanao. Na dia manan-kery mandritra ny 5 taona aza ny eTA dia tsy mihoatra ny 6 volana ny faharetanao. Azonao atao ny miditra any Canada amin'ny fotoana mety ao anatin'ny vanim-potoana manan-kery.
Izy io dia dingana haingana izay mitaky anao hamenoana an Kanada Form Form Application amin'ny Internet, ity dia mety haharitra dimy (5) minitra vao vita. Canada eTA dia navoaka taorian'ny nahavitan'ny fangatahana soa aman-tsara sy ny fandoavambola ny mpangataka an-tserasera.
CBSA (maso misahana ny serivisy misahana ny sisintany any Canada)
Inona no atao hoe Canada Visa Application?
Kanada Visa Application dia endrika elektronika an-tserasera araka ny soso-kevitry ny Fifindra-monina, ny Mpitsoa-ponenana ary ny Citizenship Canada (IRCC), hofenoin'ireo izay mikasa ny hiditra any Canada amin'ny dia fohy.
Ity fangatahana Visa Canada ity dia fanoloana ny dingana mifototra amin'ny taratasy. Azonao atao ihany koa ny mamonjy dia mankany amin'ny Masoivoho Kanadiana, satria ny Canada Visa Online (eTA Canada) dia navoaka tamin'ny alàlan'ny mailaka manohitra ny antsipirian'ny pasipaoronao. Ny ankamaroan'ny mpangataka dia afaka mamita ny Canada Visa Application Online ao anatin'ny dimy minitra, ary kivy izy ireo noho ny Governemanta Kanadiana avy amin'ny fitsidihana masoivoho kanadiana hampihatra ny dingana mifototra amin'ny taratasy. Mila navigateur mifandray amin'ny Internet ianao, adiresy mailaka ary Paypal na carte de crédit/debit handoavana ny sarany amin'ny Internet.
Indray mandeha dia feno an-tserasera ny fangatahana Visa Canada momba izany tranonkala, dia nohamarinin'ny Fifindra-monina, Mpitsoa-ponenana ary ny Citizenship Canada (IRCC) mba hanamarinana ny mombamomba anao. Ny ankamaroan'ny fangatahana Visa Canada dia tapa-kevitra ao anatin'ny 24 ora ary mety haharitra 72 ora ny sasany. Ny fanapahan-kevitry ny Canada Visa Online dia ampitaina aminao amin'ny alàlan'ny adiresy mailaka nomena.
Rehefa tapaka ny valin'ny Canada Visa Online dia azonao atao ny mitazona ny firaketana mailaka amin'ny findainao na manonta azy alohan'ny hitsidihana ny sambo Cruise na seranam-piaramanidina. Tsy mila fitomboka ara-batana amin'ny pasipaoronao ianao satria ny mpiasan'ny fifindra-monina amin'ny seranam-piaramanidina dia hijery ny visa anao amin'ny solosaina. Mila mahazo antoka ianao fa ny antsipiriany feno ao amin'ny Canada Visa Application amin'ity tranokala ity dia tsy maintsy mifanandrify tsara amin'ny anaranao voalohany, ny anaram-bolanao, ny angon-drakitra nahaterahanao, ny laharan'ny pasipaoro ary ny olana momba ny pasipaoro ary ny daty lany amin'ny pasipaoro mba hisorohana ny fandavana ny seranam-piaramanidina. ny fotoana hidirana sidina.
Iza no afaka mangataka Canada Visa Online (na Canada eTA)
Ny olom-pirenena amin'ireto firenena manaraka ireto ihany no nafahana tamin'ny fahazoana Visa hivezivezy any Canada ary tokony hampihatra fa tsy ny eTA mankany Canada.
Olom-pirenen'i Kanada sy Etazonia ny pasipaoron'izy ireo kanadiana na amerikanina ihany no mila mankany Canada.
Mponina maharitra maharitra any Etazonia, izay manana a US Green Card koa tsy mitaky Canada eTA. Rehefa mandeha ianao dia ataovy izay hitondra
- pasipaoro manan-kery avy amin'ny firenena misy anao
- porofon'ny maha-mponin'i Etazonia anao, toy ny karatra maitso manan-kery (fantatra amin'ny fomba ofisialy amin'ny anarana hoe karatry ny mponina maharitra)
Ireo mpitsidika izay mandeha any Canada amin'ny alàlan'ny fiaramanidina amin'ny alàlan'ny sidina ara-barotra na an-tserasera ihany no mila mangataka amin'ny eTA mankany Canada.
Br. Virjiny Is.
Britanika any ampitan-dranomasina
Karazan'i Canada eTA
Ny Canada eTA dia manana karazany 04, na amin'ny teny hafa, azonao atao ny mangataka ny Canada eTA raha ny tanjona amin'ny fitsidihanao ny firenena dia iray amin'ireto manaraka ireto:
Transit na layover rehefa tsy maintsy mijanona amin'ny seranam-piara-manidina Kanada na tanàna ianao mandritra ny fotoana fohy mandra-pahatongan'ny sidina manaraka mankany amin'ny toerana halehanao farany.
Tourism, fitsangatsanganana, fitsidihana fianakaviana na namana, tonga any Kanada amin'ny dia any an-tsekoly, na manatrika fampianarana fohy tsy manome mari-pankasitrahana.
Fa raharaham-barotra tanjona, ao anatin'izany ny fivorian'ny orinasa, ny asa aman-draharaha, ny matihanina, ny siansa, na ny fihaonambe fihaonambe na ny fivoriambe, na ho an'ny fandaminana ny raharaham-pananana.
Fa fitsaboana voaomana any amin'ny hopitaly kanadiana.
Fampahalalana ilaina amin'ny Canada eTA
Ireo mpangataka eTA any Canada dia mila manome ireto fampahalalana manaraka ireto amin'ny fotoana famenoana amin'ny Internet Kanada Application Form eTA:
Fampahalalana manokana toy ny anarana, toerana nahaterahana, daty nahaterahana
Isa pasipaoro, datin'ny famoahana, daty lany daty
Fampahalalana mifandraika toy ny adiresy sy ny mailaka
Antsipiriany momba ny asa
Alohan'ny hangatahanao any Canada eTA
Ireo mpandeha izay mikasa ny hangataka amin'ny Internet amin'ny Kanada eTA dia tsy maintsy manatanteraka ireto fepetra manaraka ireto:
Pasipaoro mety ho an'ny dia
Ny pasipaoron'ny mpangataka dia tsy maintsy manankery mandritra ny 03 volana fara-fahakeliny aorian'ny daty iaingana, ny daty handaozanao an'i Kanada.
Tokony hisy pejy banga koa eo amin'ny pasipaoro hahafahan'ny mpiasan'ny ladoany manisy tombo-kase ny pasipaoronao.
Ny eTA ho an'i Kanada, raha ekena, dia hampifandraisina amin'ny Pasipaoronao marina, noho izany dia takiana aminao koa ny hanana pasipaoro manan-kery, izay mety ho Pasipaoro tsotra, na pasipaoro ofisialy, diplaomatika na serivisy serivisy, navoakan'ny firenena afaka. .
ID ID marina
Ny mpangataka dia handray ny eTA any Canada amin'ny alàlan'ny mailaka, noho izany dia ilaina ny ID mailaka manan-kery hahazoana an'i Canada eTA. Ny fenitra dia mety ho fenoin'ireo mpitsidika mikasa ny ho tonga amin'ny fipihana eto Taratasy fangatahana Visa eTA Canada.
Method ny Payment
Koa satria ny eTA Canada amin'ny alàlan'ny taratasy fangatahana tsy misy afa-tsy amin'ny Internet, tsy misy mitovy amin'ny taratasy, takiana carte de crédit / debit na kaonty PayPal ilaina.
Fangatahana ho an'ny eTA Kanada
Ireo teratany vahiny manan-kery izay maniry ny handeha ho any Kanada dia mila mangataka amin'ny eTA ho an'i Kanada an-tserasera. Ny dingana iray manontolo dia miorina amin'ny tranokala, manomboka amin'ny fampiharana, fandoavam-bola ary fandefasana hatramin'ny fampandrenesana ny valin'ny fangatahana. Ny mpangataka dia tsy maintsy mameno ny taratasy fangatahana eTA any Canada amin'ny antsipiriany mifandraika amin'izany, ao anatin'izany ny antsipirian'ny fifandraisana, ny antsipirian'ny dia teo aloha, ny antsipirian'ny pasipaoro, ary ny fampahalalana hafa momba ny fahasalamana sy ny heloka bevava. Ny olona rehetra mankany Canada, na firy taona izy ireo, dia tsy maintsy mameno ity takelaka ity. Raha vantany vao fenoina ny mpangataka dia tsy maintsy manao ny fandoavam-bola amin'ny fampiharana eTA amin'ny alàlan'ny carte de crédit na debit ary avy eo mandefa ny fangatahana. Ny ankamaroan'ny fanapahan-kevitra dia tratra ao anatin'ny 24 ora ary ampandrenesina amin'ny alàlan'ny mailaka ny mpangataka fa ny tranga sasany dia mety maharitra andro na herinandro vitsivitsy vao hikarakarana. Ny tsara indrindra dia ny mangataka amin'ny eTA ho an'i Canada raha vantany vao vita ny drafitra fitsangatsangananao ary tsy aorian'izay 72 ora alohan'ny hidiranao any Kanada . Hampandrenesina anao ny fanapahan-kevitra farany amin'ny alàlan'ny mailaka ary raha tsy ekena ny fangatahanao dia mety manandrana mangataka ny Visa any Canada ianao.
Mandra-pahoviana ny firaketana ny fampiharana eTA Canada
Soso-kevitra ny fangatahana Canada eTA farafahakeliny 72 ora alohan'ny kasainao hiditra ao amin'ny firenena.
Validin'ny Kanada eTA
Ny eTA ho an'i Kanada dia manan-kery mandritra ny 5 taona manomboka amin'ny datin'ny famoahana azy na kely kokoa raha toa ka ny Passport izay ampifandraisina amin'ny alàlan'ny elektronika dia mifarana alohan'ny 5 taona. Ny eTA dia mamela anao hijanona any Canada ho an'ny farafahakeliny 6 volana indray mandeha fa azonao atao ny mampiasa azy hitsidika ny firenena matetika ao anatin'ny vanim-potoana maha-marim-pototra azy. Na izany aza, ny tena faharetana avelanao hijanona mandritra ny fotoana iray dia hotapahin'ireo tompon'andraikitra amin'ny sisintany arakaraka ny tanjonao hitsidika azy ary hasiana tombo-kase amin'ny pasipaoronao.
Miditra any Canada
Ny eTA ho an'i Kanada dia takiana mba hahafahanao mitaingina sidina mankany Kanada satria tsy misy izany dia tsy afaka mahazo sidina voafetra any Canada ianao. Na izany aza, Fifindra-monina, mpitsoa-ponenana ary zom-pirenena Canada (IRCC) na ny Tompon'andraikitra amin'ny sisintany kanadiana afaka mandà ny fidiranao ao amin'ny seranam-piaramanidina na dia ekenao aza ny mpihazona eTA Kanadà raha amin'ny fotoana nidiranao:
tsy manana ny antontan-taratasinao rehetra ianao, toy ny pasipaoronao milamina, izay hojeren'ny tompon'andraikitra amin'ny sisintany
raha miatrika olana ara-pahasalamana na ara-bola ianao
ary raha manana tantara momba ny heloka bevava / mpampihorohoro taloha ianao na olana momba ny fifindra-monina taloha
Raha efa nandamina ny antontan-taratasy rehetra ilaina amin'ny Canada eTA ianao ary mahafeno ny fepetra rehetra momba ny eTA ho an'ny Canada, dia vonona ianao mangataka Canada Visa Online izay ny taratasy fangatahana dia tsotra sy mahitsy. Raha mila fanazavana ianao dia tokony Mifandraisa aminay amin'ny helpdesk ho fanohanana sy fitarihana.
Ireo antontan-taratasy mety hanontaniana ny mpangataka Canada Visa Online any amin'ny sisin-tanin'i Canada
Fomba entina manohana ny tenany
Ny mpangataka dia mety angatahina hanome porofo fa afaka manohana ara-bola sy mivelona izy ireo mandritra ny fijanonany any Canada.
Tapakilan'ny sidina mandroso / miverina.
Ny mpangataka dia mety takiana amin'ny fampisehoana fa mikasa ny handao an'i Kanada izy ireo aorian'ny fahatongavan'ilay dia nandehanan'i Kanada eTA.
Raha tsy manana tapakila mandroso ny mpangataka dia azon'izy ireo omena ny porofom-bola sy ny fahaizana mividy tapakila amin'ny ho avy.
Tombontsoa amin'ny fampiharana amin'ny Internet
EO AMIN'NY SOA FAHA-KEVITRA MANAO ZAVA-DEHETRA NY FAMPIANARANA NY CANADA eTA ONLINE
24/365 Fampiharana an-tserasera.
Fanitsiana sy fanitsiana ataon'ny manam-pahaizana momba ny visa alohan'ny fandefasana.
Miaro amin'ny fiainana manokana sy azo antoka.
Fanamarinana sy fanamarinana ireo fampahalalana fanampiny ilaina.
Ny fanohanana sy ny fanampiana 24/7 amin'ny e-mail.
Adiresy mailaka ny eVisa anao raha sanatria misy fatiantoka.
Famerenana ny serivisy raha nolavina ny eVisa anao.
ETA TANINDRAZANA MAHAY
eTA FOMBA APPLICATION
CANADA eTA FEPETRA
KANADA eTA TYPES
CANADA VISA AMIN'NY KARATRA MAITRA ANTSIKA
AOKA ETA CANADA VISA
CANADA TRANO VISA
NY TANIN'NY RAVY MAPLE
OKTOBERFEST ATO KANADA
FANORENANA CANADA AZO AZONAO
ICE HOCKEY AO CANADA
SAKAFO KANADIANINA HO AN'NY MPITSIDIKA
MITARIKA NY TOURISTA TOA CANADA ATLANTIKA
LA CANADA - NOSY MAGDALEN
TSY MAINTSY MAHITA ONTARIO
TSY MAINTSY MAHITA VICTORIA
TSY MAINTSY MAHITA QUEBEC
TSY MAINTSY MAHITA MANITOBA
TSY MAINTSY MAHITA BRUNSWICK Vaovao
TSY MAINTSY HITA NY NEWFOUNDLAND & LABRADOR
TSY MAINTSY MAHITA CALGARY
© copyright an'ny www.canada-visa-online.org
Fialana andraikitra: Ny eTA Kanadiana navoakan'ity tranonkala varotra ity dia ampiharina mivantana ao amin'ny tranokalan'ny Governemanta Canada. Ny fifindra-monina, ny mpitsoa-ponenana ary ny zom-pirenena Canada (IRCC) dia tsy nanendry mivantana ny www.canada-visa-online.org, na ankolaka na ankolaka. Ny sarany matihanina dia takiana amin'ny serivisinay sy ny Government Visa Levy ho an'ireo izay mangataka ao amin'ity tranonkala ity.